IVeki yamaZiko aBhaliweyo yaMazwe ngaMazwe-Umbutho wamaZiko aBhalwayo eHlabathi
Sijoyine ngoFebruwari 14-18!
nqakraza Apha ukwenzela i ishedyuli yokubhiyozela iveki epheleleyo
IVeki yamaZiko okuBhala yaMazwe ngaMazwe lithuba labantu abasebenza kumaziko okubhala ukubhiyozela ukubhala nokusasaza ulwazi malunga neendima ezibalulekileyo ezidlalwa amaziko okubhala ezikolweni, kwiikhampasi zekholeji, nakuluntu olukhulu.
I-International Writing Centres Association, ekuphenduleni ucingo oluvela kubulungu bayo, yenza "iVeki yokuBhala yamazwe ngamazwe" kwi-2006. Ikomiti yobulungu yayiquka uPam Childers, uMichele Eodice, uClint Gardner (uSihlalo), uGayla Keesee, uMary Arnold Schwartz, noKatherine. Theriault. Iveki icwangciselwe unyaka ngamnye malunga noSuku lweValentine. I-IWCA inethemba lokuba lo msitho waminyaka le uya kubhiyozelwa kumaziko okubhala kwihlabathi jikelele.
I-IWCA ibhiyozele amaziko okubhala ngeveki ye-8 kaFebruwari, 2021.
Ukubona into esiyenzileyo kunye nokujonga kwimephu esebenzisanayo yeziko lokubhala kwihlabathi liphela, bona Iveki ye-IWC 2021.